Author Topic: နှစ်သက်မိသော သရော်စာများ (Read 39246 times)
« on: May 09, 2011, 04:03:10 PM »
“ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျနော်က အလုပ်လာရှာတာ၊ ကိုဖိုးကျော်ဆီဆက်သွယ်ပြီး လိုအပ်တာ အကူအညီတောင်းဖို့ မှာလိုက်လို့”
“ငါက Dover မှာနေတာဆိုတော့ ဒီလိုလုပ်ကွာ၊ နေ့လည် ၁ နာရီလောက် ပင်နင်ဆူလာပလာဇာ မှာ တွေ့ကြတာပေ့ါ၊ ပင်နင်ဆူလာ ကို သိတယ်မို့လား၊ ဗမာတွေစုတဲ့နေရာလေ”
“ဟုတ်ကဲ့…ဟုတ်ကဲ့…ကျနော်က မနေ့ကမှရောက်တာဆိုတော့ သေချာတော့မသိဘူး…မေးစမ်းပြီးလာခဲ့ပါမယ်”
နေ့လည်ပိုင်း ရွှေဝါမြေကဖီးမှာ ဂျာနယ်ဖတ်ရင်း တယောက်ထဲထိုင်စောင့်နေတုန်း ဖုန်းမြည်လာတယ်၊
“အကို….ကျနော် ပြည့်စုံမင်းသွေး ပါ”
“အေး…မင်းအခု ဘယ်ရောက်နေပြီလဲ၊ ငါစောင့်နေတာ ကြာပြီ”
ဟိုက်…ဒီကောင်မနက်ကမှ စင်္ကာပူမှာ ရှိပါသေးတယ်၊ ခု ဘယ့်နှယ့်လုပ်ပြီ တောင်အမေရိကတိုက်ဘက် ရောက်သွားတာပါလိမ့်၊ ဟုတ်သေးပါဘူး ဖုန်းနံပတ်ကလည်း ဒီကဖုန်းနံပတ်ကြီးပါဘဲ
“ဟေ့ရောင် မင်းငါ့ကိုနောက်နေပြန်တာလား၊ သေချာပြန်ပြောစမ်း မင်းအခုဘယ်မှာရောက်နေသလဲဆိုတာကို”
“မနောက်ပါဘူးအကိုရာ…မနက်က အကိုပြောတဲ့နေရာလေ…ဗင်နီဇွဲလားပလာဇာ ဆိုတာ”
“အကိုက ကိုဖိုးကျော် လားဗျာ၊ ကျနော်က ပြည့်စုံမင်းသွေးပါ”
“အော်…ဟုတ်တယ်၊ ဒီလောက်လူတွေအများကြီးကြားထဲ ငါ့ကို ဖိုးကျော်မှန်း မင်းဘယ်လိုလုပ်သိလည်း”
“လွယ်ပါတယ် အကိုရာ၊ ကိုသန်းထူးကပြောဘူးတယ်လေ၊ ကိုဖိုးကျော်ရုပ်ကခန့်ခန့်ချောချောကြီးတဲ့…ခုမြင်တာနဲ့ တန်းသိတာပေ့ါ”
“ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကတော့ မင်းရဲ့ CV form ကို ရေးရလိမ့်မယ်”
စာရွက်တစ်ရွက် ထုတ်ပေးလို့ ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့….အောင်မလေးဗျ၊ ကောင်းလိုက်တဲ့ CV ကြီး၊ အလုပ်တော့ရအုံတော့မှာ…ကြည့်ကြပါအုံး….
အမည်။ ။ ရာဇာပြည့်စုံမင်းသွေး
အဖအမည်။ ။ ဦးပြည့်စုံ
ဆက်သွယ်ရန်။ ။ +65 81729646
“ဘယ်ရမှာလဲကွာ…ထားပါတော့ ငါ့ဟာငါ ပြင်လိုက်ပါမယ်၊ ဒါနဲ့ ပညာအရည်အချင်း သင်္ချာဆိုတာက ဘာပြောတာတုန်း”
အင်း…အသုံးတည့်အုံးတော့မှာပေ့ါ….လုပ်လိုက်ဟ သန်းထူးရေ့ ဗြမ္မာကြီးဦးခေါင်း ငါ့ဆီလွှဲလိုက်တာလား….
“ကောင်းပါ့ကွာ…ဒါပေမဲ့ သင်္ချာဘွဲတခုထဲနဲ့တော့ အလုပ်ရှာရတာ မလွယ်လောက်ဘူးကွ၊ တခြား အောင်လက်မှတ်လေး ဘာလေးများမရှိတော့ဘူးလား”
“ဒီမှာ…..”… …ဆိုပြီး ထုတ်ပြလာတဲ့ အောင်လက်မှတ်၂ခုလည်းမြင်လိုက်ရော…ကျနော်လည်း ငုတ်တုတ်မေ့ရောဗျို့။
အောင်မြလေး….ဝိတ်မတဲ့အရံမီးသတ်ကြီးကို ကျုပ်ကဘယ်လိုလုပ် အလုပ်ရှာပေးရမလဲဗျ။
..ကယ်ကြပါအုံးအရပ်ကတို့၊ သန်းထူးတို့ အဝေးကနေကျနော့် ကိုသတ်နေလို့။
ဒါကြောင့်လည်း သူညီ ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်က အသက်နဲ့မလိုက်အောင်ကြီးနေတာကိုး။
တခါဖြင့်ခက်ကြပြီ။ တတ်နိုင်ဘူး ကြည့်ပြောကြည့်လုပ်ရမှာဘဲ။
“အင်းလေ…ငါ မင်းရဲ့ CV form ကို အသစ်ပြန်ရိုက်ပြီး မင်း Email ထဲ ပို့လိုက်မယ်၊ Email လိပ်စာပေးခဲ့လေ။ ပြီးတော့ သတင်းစာလေးဘာလေးဝယ် ပြီးသင့်တော်ရာ ကိုယ်နဲ့ကိုက်မယ်ထင်တာလေးတွေ လျှောက်ကြည့်ပေ့ါကွာ၊ ငါလဲ တတ်နိုင်သလောက် ကူရှာပေးမယ် ဟုတ်ပြီလား”
“ဟုတ်ကဲ့အကို…ခုလိုကူညီပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကိုဖိုးကျော်က ရုပ်ချောယုံတင်မဟုတ်ဘူး သဘောလည်းကောင်းတာကိုး”
ဒီလိုနဲ့ သတင်းစာထဲမှာခေါ်တဲ့ ကောင်းနိုးရာရာ ရနိုင်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေရှာပြီး သူ့ကိုလျှောက်ခိုင်းလိုက်၊ နီးစပ်ရာသူငယ်ချင်းတွေကို မေးမြန်းစုံစမ်းလိုက်နဲ့ အချိန်တွေတရွေ့ရွေ့ကုန်လာတယ်။ အမှန်က အလုပ်ကို ရှာမယ့်သာရှာနေရတာ သိပ်အားရှိလှတာမဟုတ်ဘူးရယ်။ ဘယ်တတ်နိုင်မလည်းလေ၊ သူ့အရည်အသွေးနဲ့ သူ့ကံအပေါ်မူတည်တာ၊ ခုတလော ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးပျက်ကပ်ကြောင့် စင်္ကာပူမှာလည်း အလုပ်အကိုင်တွေ ရှားပါးနေတာလေ။ အရင်ကအလုပ်ပေါတဲ့ Technician တွေ၊ စာရင်းကိုင်တွေတောင် အလုပ်ရဖို့မလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။
ဒီ မင်းသွေး ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်း သူများနိုင်ငံခြားဆိုလို့သာ လိုက်နိုင်ငံခြားတာ၊ တကယ်က မိဘတွေက လူချမ်းသာတွေတဲ့၊ တရက်က သန်းထူးနဲ့ ဖုန်းပြောဖြစ်လို့သိရတာ။ ကောင်းတာပေ့ါ၊ အလုပ်မရလို့ Stay ကုန်တော့လည်း ပြန်ခိုင်းယုံရှိတာဘဲ၊ လာခဲ့တဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကို အားနာစရာမလိုတော့ဘူးပေ့ါ။ ဒီလိုလေး စဉ်းစားထားလို့မှ ရက်သိပ်မကြာဘူး ဒီကောင့်ဆီက ဖုန်းဝင်လာတယ်… …
“ဟုတ်မယ်ထင်တယ်…သူဌေးက ကျနော့်ဗလ ကြည့်ပြီး သဘောကျလို့ ခန့်လိုက်တာ”
ခရစ်ဒစ်တူ ---> မြန်မာဟာသဂရုပ် ( ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် )
သဘောကျလွန်းလို့ တင်ပါသည် ဂိဂိ
« Last Edit: May 09, 2011, 04:05:35 PM by ဂိ ဂိ »
« Reply #1 on: May 15, 2011, 03:02:09 PM »
"ဘာကွ... မြန်မာငွေ ပါမလာဘူး။ ဟုတ်လား။ မင်းတို့ဆီက စင်ကာပူဒေါ်လာက
အေးလေ... မြန်မာနိုင်ငံထဲ ဝင်လာလို့ ရတယ်ဆိုတာ နည်းတဲ့ အခွင့်အရေးမှ
မဟုတ်တာ။ အကြံအဖန်တွေကလဲ အများသား မဟုတ်လား။ ဒီတော့လဲ.... ဒီလောက်တော့
စစ်ဆေးရမှာပေါ့။ စက်ကတော့ အကြံအဖန်က မစစ်နိုင်ဘူးလေ...
အိုစမာဘင်လာဒင်ဆိုသော အကြမ်းဖက်သမားကြီးသေပြီးနောက် သူ့အဖွဲ့မှလူများက
အမေရိကန်ရှိ မြို့ (၁၅)မြို့ကို အဏုမြူဗုံးခွဲလေတော့သည်။ ထိုအထဲတွင်
အဏုမြူထိပ်ဖူးများသိုလှောင်သော လက်နက်ရုံလဲ ပါသွားရာ နိုင်ငံတခြမ်း
အဏုမြူလက်နက်၊ ဓာတုလက်နက်များဖြင့် ပြန်တိုက်ရာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းတခွင်
ထိုသို့ စစ်ဖြစ်ရသည်မှာ ဥရောပကြောင့်ဟု စွပ်စွဲပြီး အီးယူနှင့် နေတိုးကို
စစ်ကြေငြာတော့သည်။ ဗြိတိန်နှင့် ရန်စရှိသော အာဂျင်တီးနားက ဘရာဇီးကို
အာရပ်နိုင်ငံများဖက်မှ မဟာမိတ်လုပ်သည်။ စစ်တို့၏ ထုံးစံအတိုင်း ပါဝင်သူ
နိုင်ငံအားလုံး ပြာပုံသာသာ ဖြစ်ကျန်ခဲ့တော့သည်။
ထိုသို့ စစ်ကြီးပြီးစမှာပင် ငလျင် အလှုပ်များသော အာတိတ်မီးစက်ဝန်း(Arctic
ring of Fire) တွင် ပြင်းအားအဆင့် ၁၈ ရှိသော ငလျင်ကြီးလှုပ်ရာ
ဆူနာမီကြောင့် သြစတြေးလျတိုက်နှင့် အာရှ အရှေ့ပိုင်းကုန်လေသည်။
ဂျပန်ဆိုရင် လှိုင်းလုံးကြီးသည် ကျွန်းအရှေ့မှ အနောက်သို့တိုင်
ဖြတ်သွားလေသည်။ အီရန် စစ်ပွဲနှင့်အတူ နူကလီးယား
လက်နက်များပြန့်ပွားသွားရာ ချေချင်းညာရှိ ခွဲထွက်ရေး သူပုန်များက
ရုရှကိုလည်းကောင်း၊ တိဘက်မှ တရုတ်ကိုလည်းကောင်း၊ ပါကစ္စတန်နှင့် အိန္ဒိယက
ဆူနာမီလှိုင်းလုံးကြီးက တကျွန်းလုံးကို ဖြတ်အုပ်သွားရာ တနိုင်ငံလုံး
သည်။ အာဖရိက အနေဖြင့်လဲ အခြေခံ
အဆောက်အဦးပိုင်းမပြည့်စုံ။ ထိုင်းကလဲ ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့
နယ်စပ်ပြဿနာဖြေရှင်းနေရာ စစ်ပွဲဖြစ်သဖြင့် တိုးတက်ရေးကို
အာရုံမစိုက်နိုင်။ ထိုနောက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်အားကြီးဖြစ်လာသည်။
တို့မှာ စစ်ကြောင့်ပျက်စီးမှု ထဲပါသွားသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ လူငယ်တစ်စုက
"ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ" ဟူသော အင်တာနက်ရှာဖွေရေးတည်ထောင်ရာ အောင်မြင်သဖြင့်
စသည်တို့ နာမည်ရလာကာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသုံးဖြစ်လြာ
ကသည်။ ယူကျု အစား
မြန်မာစုဗူးစသည်ဖြင့် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ပေးနိုင်သဖြင့်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလျှံပယ်ထွက်နေသဖြင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးမှာ မိုးထိအောင်
ထောင်တက်တော့သည်။ ဂျပန်နှင့် တရုတ်မှ ကားထုတ်မည်ဆိုကာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်
စက်ရုံဆောက်ပြီးကာမှာ နှစ်နိုင်ငံစလုံး ပြာကျသွားဖြင့်
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကားစက်ရုံကြီးမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာတည်ရှိတော့
အရင်က စက်မှုဇုန်များမှာလဲ ကားစက်ရုံများဖြစ်နေကြပြီ။
ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ လိုအပ်သဖြင့် ဂျပန်မှ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေသော
ယခင်စက်ရုံလုပ်သားဟောင်းများမှ ကျွမ်းကျင်သူများကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်
ပြည်လည်ခေါ်ကာ ခန့်ထားရသည်။ ပထမပိုင်းတွင်
း နောက်ပိုင်း အကြံအဖန်များလာသဖြင့်
ဗီဇာကိုတင်းကျပ်ရတော့သည်။ ဒါတောင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အိုဗာစတေးအများစုမှာ
ဂျပန်ကို အမှီလိုက်တာက ကိုရီးယား။ ဆူနာမီပြီးတာ့ သံဝေဂတွေရကာ
ဒါကြောင့် ချမ်းသာသည့် မြန်မာနိုင်ငံထဲလာချင်သည့် ကိုရီးယားတွေများလာသည်။
တချိန်က မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုရီးယားကားများ ခေတ်စားခဲ့သဖြင့်
ကိုရီးယားသား၊ ကိုရီးယားသူချောချောလေးတွေဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်
အလုပ်ရလွယ်သည်။ ဧည့်ကြို၊ အရောင်းဝန်ထမ်း စသည့် လူများနှင့် ဆက်ဆံရသော
နေရာများတွင် ထိုကဲ့သို့ ချောချောလေးများ ထားလျှင် အဆင်ပြေ တတ်သဖြင့်
ဖြစ်သည်။ သို့သော် မြန်မာစကားကို ကျွမ်းကျင်အောင် တတ်မှသာလျှင်
အလုပ်ရလွယ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲဒီလို အလုပ်လိုချင်တဲ့ ဂျပန်သူ၊
ဂျပန်သားချောချောတွေ၊ ဥရောပသူ ဥရောပသားချောချောတွေကလည်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်လိုသူများမှာ မြန်မာစကားကို
ပညာရေးဘက်ကိုကြည့်ဦးမလား။ အထင်ကရ တက္ကသိုလ်မှန်သမျှ ပြာဖြစ်ကုန်ရာ ၁၉၂၀
ပြည့်က စဖွင့်ခဲ့သော ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သည်သာ
ကမ္ဘာပေါ်တွင် နာမည်အကြီးဆုံး တက္ကသိုလ်ဖြစ်နေတော့သည်။
အသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ထားသော အောက်စဖို့၊ ကင်းဘရစ် စသည့်
အစဉ်အလာရှိသည့် တက္ကသိုလ်များမှ ထွက်မှသာလျှင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင်
ပညာဆက်လက်သင်ကြားရန်အတွက် အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲဖြေရန်
အသိအမှတ်ပြုသည်။ အစဉ်အလာမရှိသည့် တက္ကသိုလ်များမှဆိုလျှင် ဟားခါးတက္ကသိုလ်၊
နယ်စွန်နယ်ဖျားမှ ကျောင်းများထံတွင် အရည်အချင်းစစ်
စာမေးပွဲသွားရောက်ဖြေဆိုကြရသည်။ သို့သော် နိုင်ငံတကာမှ
လာတက်ကြသည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ MBA ဘွဲ့ တခုရလျှင်ပင် ဘယ်နိုင်ငံမဆို
အလုပ်သွားလျှောက်လျှင် ကုမ္ပဏီ ကြီးကြီးတွင် အနည်းဆုံး မန်နေဂျာ
ရာထူးတော့ ကျိန်းသေရနိုင်သည်မဟုတ်လား။ တချို့ကလည်း ဘွဲ့ရလျှင်
မြန်မာနိုင်ငံထဲတွင် အလုပ်ပြန်လျှောက်ကြသည်။ ရသည့် လစာကလည်း
ကွာတာကိုး။ မြန်မာတွင်အလုပ်ရပါက မိခင်နိုင်ငံရှိအိမ်ကို
ငွေပြန်ပို့နိုင်ပြီး ဖောဖောသီသီ သုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ရုံးခွဲအဆင့်လောက်သာ ဖွင့်ထားတော့သည်။ ရေမြင့်လျှင် ကြာတင့်ဆိုသလို
မြန်မာနိုင်ငံသားများလည်း မျက်နှာပွင့်တော့သည်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတိုင်းသည်
မြန်မာပတ်စ်ပို့ကို ဆိုက်ရောက်ဗီဇာပေးထားသည်။ ဘာမှကြိုလျှောက်စရာမလို
ရောက်တာနဲ့ immigration ကိုဝင် ပတ်စ်ပို့ ပြလိုက်သည်နှင့် အိုကေ။
ရှိုးမန်းနီး ဘာညာပြစရာမလို၊ နိုင်ငံသားတိုင်းတွင် ပတ်စ်ပို့
နံပါတ်တခုစီအတွက် ဘဏ်အကောင့်ရှိထားပြီသား။ ဘယ်နိုင်ငံ ဘယ်ဘဏ်မှာမဆို
ပိုက်ဆံထုတ်လို့ရသည်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကလည်း ငွေကြေးယူနစ်ကို ကျပ်ဖြင့်သာ
တွက်၍ပြောတော့သည်။ ဘယ်နိုင်ငံသွားသွား ပတ်စ်ပို့ အနီရောင်လေး
မြင်လိုက်တာနဲ့ အိုကေ။ မြန်မာနိုင်ငံသားများကလည်း တချိန်က
နာမည်ကြီးခဲ့သော အမေရိကန်ကို သွားလည်လေ့ရှိသည်။ စစ်ကြောင့်
ပတ်စ်ပို့ အနီရောင်မြင်လျှင်လန့်လေ့ရှိသည်။ သူတို့စီးပွားရေး
လုပ်ငန်းများ၏ သူဌေးတော်တော်များများမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှဖြစ်ကြသောကြောင်
ဖြစ်သည်။ တော်သေးတာတခုက မြန်မာနိုင်ငံက အမေရိကန်ဒေါ်လာကို
လက်ခံနေသေးတာပင်။ ဒေါ်လာ၊ ပေါင်၊ ယူရိုစသည့် တို့နှင့်
အိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံ ငွေကြေးလောက်သာ မြန်မာက လက်ခံသည်။ ဒါတောင်
Exchange မှာလဲပြီးသုံးရသည်။ တိုက်ရိုက်သုံး၍မရ။ မြန်မာကျပ်ကတော့
ဘယ်နိုင်ငံမဆို လဲ၍လည်းရ၊ တိုက်ရိုက်သုံး၍လည်းရသည်။
ဝင်ချင်သူများအဖို့ အတော်ခက်ခဲသည်။ နိုင်ငံအတွင်းရှိ နိုင်ငံသားတယောက်က
ထောက်ခံပေးမှသာလျှင် ဗီဇာရနိုင်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်သူများအဖို့
ဘုန်ကြီးများဆီ အပူကပ်ကာ ဗီဇာရအောင်လျှောက်ပြီး နေလျှင်လည်း
သည်။ သို့သော် သူတို့ အပြောအရ
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းများမှာ ဂျပန်၊ အမေရိကန် နှင့်
ဟော်တယ်များထက် ပိုသာသည်ဟုဆိုကြသည်။ ဗီဇာက တလခန့်သာရလေ့ရှိရာ
ထိုအတောအတွင်း အလုပ်လေးတခုရအောင် လျှောက်ကြရသည်။
ယခင်က ဘုန်းကြီး ကပ္ပိယလုပ်လိုသူများအတွက် ကပ္ပိယဗီဇာပေးသော်လည်း
အကြံအဖန်များလာသဖြင့် ထိုဗီဇာထုတ်ပေးခြင်းကို ရပ်နားထားရသည်။ ယခင်က
အာဆီယံ နိုင်ငံအဖွဲ့ဝင်များကို ဗီဇာစည်ကမ်းများလျော့ပေါ့ပေးရာ စင်ကာပူ၊
မလေးမှ အကြံအဖန်များဝင်လာခြင်း၊ အိုဗာစတေးများ များလာခြင်းတို့ကြောင့်
ပြန်လည်တင်းကျပ်ရသည်။ မလေးကကောင်တွေဆိုပိုဆိုး မြန်မာစကားလဲ
National League (MNL) သာရှိသဖြင့် ဘရာဇီး၊ အာဂျင်တီးနား၊
ဂျာမနီစသည်တို့မှ ဘောလုံးသမားအားလုံး လာရောက်ကစားရသည်။ MNL တွင်
လာမကစားဖူးလျှင် ကမ္ဘာ့အဆင့် ဘောလုံးသမားဟု မသတ်မှတ်ကြ။
လက်ခံကျင်းပရသည်မှာ (၃)ကြိမ်ဆက်ရှိပြီး ထို(၃)ကြိမ်စလုံးဗိုလ်စွဲခဲ့သည်။
ဆက်သွယ်ရေးဘက်ကိုကြည့်ဦးမလား။ တနိုင်ငံလုံးအင်တာနက်မမိတဲ့ နေရာမရှိ။
ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားမှသည် ပူတာအို ရေခဲတောင်အထိ
အင်တာနက်ရသည်။ အနှေးဆုံး 1Gbs to အမြန်ဆုံး 10Gbs အထိရသည်။
ကျန်တဲ့နေရာက ကတ္တရာ၊ ကွန်ကရစ်အပြည့်ခင်းထားတာ။ ကော့သောင်းမှ ပူတာအိုအထိ
မောင်းသူမဲ့ တက္ကဆီများပြေးဆွဲပေးသည်။ အခြားဘယ်နိုင်ငံမှ မရှိ။
« Last Edit: December 08, 2011, 03:17:31 AM by imail »
« Reply #2 on: May 22, 2011, 12:44:07 AM »
"ဘာကွ... မြန်မာငွေ ပါမလာဘူး။ ဟုတ်လား။ မင်းတို့ဆီက စင်ကာပူဒေါ်လာက ဒီမှာသုံးလို့ ရမယ်ထင်လို့လားကွ။" လူဝင်မှု အရာရှိ၏ ဟိန်းဟောက်မှုကြောင့် အဆိုပါ စင်ကာပူသား ခေါင်းလေး ပုဝင်သွားသည်။ ထို့နောက် မြန်မာစကား မပီကလာ ပီကလာဖြင့် "ကျနော် ရှာဝယ်ပါသေးတယ်။ မရလို့ အမေရိကန်ေ...ဒ်ါလာနဲ့ ထိုင်းဘတ်ပဲ ဝယ်လာခဲ့တာပါ။ မြန်မာ အကြွေတွေတော့ နည်းနည်း ပါပါတယ်။" ဟုဆိုကာ တဆယ်ကျပ်တန် နှင့် ငါးဆယ်တန် တရွက်စီ ထုတ်ပြသည်။ ဒါနဲ့ မင်းက ဒီပိုက်ဆံလောက်နဲ့ ဘယ်မှာနေမှာတုန်း။ မှန်းစမ်း ဗီဇာလျှောက်တုန်းက ထောက်ခံသူမှာ ကြည့်လိုက်ဦးမယ်။ အော်... မင်းက ဘုန်းကြီးကျောင်းက ထောက်ခံချက်နဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာနေမှာပေါ့။ အခု မင်းလာတာ အလည်ဗီဇာနဲ့နော်။ အလုပ်လုပ်လို့ မရဘူး။ နားလည်တယ်နော်။ မင်းတို့ စလုံးက ကောင်တွေမပြောချင်ဘူး။ အလည်လာ ဒီမှာနေ။ တောက်တိုမယ်ရ အလုပ်လေးလျှောက်။ အခြေအနေမကောင်းရင် ခဏပြန်ထွက် ပြီးရင်ပြန်ဝင်။ ဒီကြားထဲ အိုဗာစတေးတွေလဲ မနည်းဘူး။ ကဲ.. ကဲ... သွားတော့။ လူဝင်မှု အရာရှိရှေ့မှ စင်ကာပူသား ခေါင်းလေးငုံ့ကာဖြင့် ရိုရိုကျိုးကျိုးလျှောက်သွားသည်။ ကျနော်လဲ ဘေးမှကြည့်နေမိသည်။ အော်.. တော်တော်ခက်တဲ့ စလုံးသားပဲ မအူမလည်နဲ့။ ကျနော်တို့လို နိုင်ငံသားများအတွက်က လွယ်သည်။ ID Card ကို တင်ပေးလိုက်သည်နှင့် အချက်အလက်များအားလုံးယူပြီးသားဖြစ်သွားသည်။ ထိုနောက် အလိုအလျောက် Update လုပ်သည့် စက်ထဲ ပတ်စ်ပို့ ထည့်လိုက်လျှင် တံဆိပ်တုံး ထုပြီးသားဖြစ်သွားသည်။ လူနဲ့ စကားပြောစရာမလို။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံသားနဲ့ နိုင်ငံခြားသား ခွဲပြီး တန်းစီခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။ အေးလေ... မြန်မာနိုင်ငံထဲ ဝင်လာလို့ ရတယ်ဆိုတာ နည်းတဲ့ အခွင့်အရေးမှ မဟုတ်တာ။ အကြံအဖန်တွေကလဲ အများသား မဟုတ်လား။ ဒီတော့လဲ.... ဒီလောက်တော့ စစ်ဆေးရမှာပေါ့။ စက်ကတော့ အကြံအဖန်က မစစ်နိုင်ဘူးလေ... လွန်ခဲ့သော နှစ် (၅၀)ခန့်က... အိုစမာဘင်လာဒင်ဆိုသော အကြမ်းဖက်သမားကြီးသေပြီးနောက် သူ့အဖွဲ့မှလူများက အမေရိကန်ကိုလက်စားချေမည်ဆိုကာ အီရန်မှ ခိုးလာသော ယူရေနီယမ်များကိုသုံးကာ အမေရိကန်ရှိ မြို့ (၁၅)မြို့ကို အဏုမြူဗုံးခွဲလေတော့သည်။ ထိုအထဲတွင် အဏုမြူထိပ်ဖူးများသိုလှောင်သော လက်နက်ရုံလဲ ပါသွားရာ နိုင်ငံတခြမ်း ပြုတ်ပြုတ်ပြုန်းလေတော့သည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်ကြောင့် အီရန်ကို အမေရိကန်က ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဗုံးကြဲချရာ အီရန်က လက်လှမ်းမှီရာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများတွင် တပ်စွဲထားသော အမေရိကန်များနှင့် အစ္စရေးကို အဏုမြူလက်နက်၊ ဓာတုလက်နက်များဖြင့် ပြန်တိုက်ရာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းတခွင် စစ်မြေပြင်ဖြစ်ကာ ပြာပုံအတိဖြစ်တော့သည်။ ထိုနောက်ပိုင်းတွင် အာရပ်နိုင်ငံများတွင် အစွန်းရောက်ဝါဒီများ တက်လာပြီး ထိုသို့ စစ်ဖြစ်ရသည်မှာ ဥရောပကြောင့်ဟု စွပ်စွဲပြီး အီးယူနှင့် နေတိုးကို စစ်ကြေငြာတော့သည်။ ဗြိတိန်နှင့် ရန်စရှိသော အာဂျင်တီးနားက ဘရာဇီးကို စည်းရုံးပြီး အာရပ်နိုင်ငံများဖက်မှ မဟာမိတ်လုပ်သည်။ စစ်တို့၏ ထုံးစံအတိုင်း ပါဝင်သူ နိုင်ငံအားလုံး ပြာပုံသာသာ ဖြစ်ကျန်ခဲ့တော့သည်။ ထိုသို့ စစ်ကြီးပြီးစမှာပင် ငလျင် အလှုပ်များသော အာတိတ်မီးစက်ဝန်း(Arctic ring of Fire) တွင် ပြင်းအားအဆင့် ၁၈ ရှိသော ငလျင်ကြီးလှုပ်ရာ ဆူနာမီကြောင့် သြစတြေးလျတိုက်နှင့် အာရှ အရှေ့ပိုင်းကုန်လေသည်။ ဂျပန်ဆိုရင် လှိုင်းလုံးကြီးသည် ကျွန်းအရှေ့မှ အနောက်သို့တိုင် ဖြတ်သွားလေသည်။ အီရန် စစ်ပွဲနှင့်အတူ နူကလီးယား လက်နက်များပြန့်ပွားသွားရာ ချေချင်းညာရှိ ခွဲထွက်ရေး သူပုန်များက ရုရှကိုလည်းကောင်း၊ တိဘက်မှ တရုတ်ကိုလည်းကောင်း၊ ပါကစ္စတန်နှင့် အိန္ဒိယက အချင်းချင်းလည်းကောင်း အသီးသီး တွယ်လိုက်ရာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် နိုင်ငံတော်တော်များများပြာကျကုန်သည်။ စင်ကာပူဆိုလျှင်လည်း ဆူနာမီလှိုင်းလုံးကြီးက တကျွန်းလုံးကို ဖြတ်အုပ်သွားရာ တနိုင်ငံလုံး ဖြူကာပြာကာ ကျသွားသည်။ ထို့နောက်တွင်မတော့ အကောင်းပကိကျန်တာဆိုလို့ အာဖရိကတိုက်နှင့် အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံအနည်းငယ်ပဲကျန်တော့သည်။ အာဖရိက အနေဖြင့်လဲ အခြေခံ အဆောက်အဦးပိုင်းမပြည့်စုံ။ ထိုင်းကလဲ ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ နယ်စပ်ပြဿနာဖြေရှင်းနေရာ စစ်ပွဲဖြစ်သဖြင့် တိုးတက်ရေးကို အာရုံမစိုက်နိုင်။ ထိုနောက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်အားကြီးဖြစ်လာသည်။ ကမ္ဘာစစ်ဖြစ်သဖြင့် အင်တာနက်မပျက်သော်လည်း Google, Facebook Data Center တို့မှာ စစ်ကြောင့်ပျက်စီးမှု ထဲပါသွားသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ လူငယ်တစ်စုက "ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ" ဟူသော အင်တာနက်ရှာဖွေရေးတည်ထောင်ရာ အောင်မြင်သဖြင့် နေ့ချင်းညချင်း ဘီလျံနာဖြစ်သွားသည်။ Facebook ပျောက်ဆုံးမှုနှင့် အတူ မြန်မာကျူးပစ်၊ မြန်မာဆိုက်ဘာမီဒီယာ စသည်တို့ နာမည်ရလာကာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသုံးဖြစ်လာကြသည်။ ယူကျု အစား မြန်မာစုဗူးစသည်ဖြင့် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ပေးနိုင်သဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နည်းပညာသူဌေးတွေ ပေါလာသည်။ စီးပွားရေးဘက်ကိုကြည့်ဦးမလား။ တချိန်က ရေနံအများဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ စစ်ကြောင့် ရေနံတွင်းတွေမီးလောင်တာတောင် ကုန်အောင်မငြိမ်းနိုင်သေး။ ပိုပြီးသန့်စင်တဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကလဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလျှံပယ်ထွက်နေသဖြင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးမှာ မိုးထိအောင် ထောင်တက်တော့သည်။ ဂျပန်နှင့် တရုတ်မှ ကားထုတ်မည်ဆိုကာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စက်ရုံဆောက်ပြီးကာမှာ နှစ်နိုင်ငံစလုံး ပြာကျသွားဖြင့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကားစက်ရုံကြီးမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာတည်ရှိတော့သည်။ အရင်က စက်မှုဇုန်များမှာလဲ ကားစက်ရုံများဖြစ်နေကြပြီ။ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ လိုအပ်သဖြင့် ဂျပန်မှ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေသော ယခင်စက်ရုံလုပ်သားဟောင်းများမှ ကျွမ်းကျင်သူများကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည်လည်ခေါ်ကာ ခန့်ထားရသည်။ ပထမပိုင်းတွင် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများလာသော်လည်း နောက်ပိုင်း အကြံအဖန်များလာသဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံသားများ၏ ဗီဇာကိုတင်းကျပ်ရတော့သည်။ ဒါတောင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အိုဗာစတေးအများစုမှာ ဂျပန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဂျပန်ကို အမှီလိုက်တာက ကိုရီးယား။ ဆူနာမီပြီးတာ့ သံဝေဂတွေရကာ တောင်နှင့်မြောက်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခဲ့သော်လည်း နှစ်နိုင်ငံစလုံးပြာဖြစ်နေသဖြင့် ဆင်းရဲတွင်းကမတက်နိုင်ဖြစ်နေရသည်။ ဒါကြောင့် ချမ်းသာသည့် မြန်မာနိုင်ငံထဲလာချင်သည့် ကိုရီးယားတွေများလာသည်။ တချိန်က မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုရီးယားကားများ ခေတ်စားခဲ့သဖြင့် ကိုရီးယားသား၊ ကိုရီးယားသူချောချောလေးတွေဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလုပ်ရလွယ်သည်။ ဧည့်ကြို၊ အရောင်းဝန်ထမ်း စသည့် လူများနှင့် ဆက်ဆံရသော နေရာများတွင် ထိုကဲ့သို့ ချောချောလေးများ ထားလျှင် အဆင်ပြေ တတ်သဖြင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော် မြန်မာစကားကို ကျွမ်းကျင်အောင် တတ်မှသာလျှင် အလုပ်ရလွယ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲဒီလို အလုပ်လိုချင်တဲ့ ဂျပန်သူ၊ ဂျပန်သားချောချောတွေ၊ ဥရောပသူ ဥရောပသားချောချောတွေကလည်း တန်းစီနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်လိုသူများမှာ မြန်မာစကားကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်အောင် သင်ကြားကြရသည်။ ပညာရေးဘက်ကိုကြည့်ဦးမလား။ အထင်ကရ တက္ကသိုလ်မှန်သမျှ ပြာဖြစ်ကုန်ရာ ၁၉၂၀ ပြည့်က စဖွင့်ခဲ့သော ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သည်သာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် နာမည်အကြီးဆုံး တက္ကသိုလ်ဖြစ်နေတော့သည်။ အသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ထားသော အောက်စဖို့၊ ကင်းဘရစ် စသည့် အစဉ်အလာရှိသည့် တက္ကသိုလ်များမှ ထွက်မှသာလျှင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ပညာဆက်လက်သင်ကြားရန်အတွက် အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲဖြေရန် အသိအမှတ်ပြုသည်။ အစဉ်အလာမရှိသည့် တက္ကသိုလ်များမှဆိုလျှင် ဟားခါးတက္ကသိုလ်၊ မြဝတီတက္ကသိုလ်၊ တာချီလိတ်တက္ကသိုလ်စသည်ဖြင့် နယ်စွန်နယ်ဖျားမှ ကျောင်းများထံတွင် အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲသွားရောက်ဖြေဆိုကြရသည်။ သို့သော် နိုင်ငံတကာမှ ကျောင်းသားများကတော့ လာတက်ကြသည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ MBA ဘွဲ့ တခုရလျှင်ပင် ဘယ်နိုင်ငံမဆို အလုပ်သွားလျှောက်လျှင် ကုမ္ပဏီ ကြီးကြီးတွင် အနည်းဆုံး မန်နေဂျာ ရာထူးတော့ ကျိန်းသေရနိုင်သည်မဟုတ်လား။ တချို့ကလည်း ဘွဲ့ရလျှင် မြန်မာနိုင်ငံထဲတွင် အလုပ်ပြန်လျှောက်ကြသည်။ ရသည့် လစာကလည်း ကွာတာကိုး။ မြန်မာတွင်အလုပ်ရပါက မိခင်နိုင်ငံရှိအိမ်ကို ငွေပြန်ပို့နိုင်ပြီး ဖောဖောသီသီ သုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တချိန်က နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Microsoft, Apple ဆိုတာတွေကို မြန်မာနိုင်ငံမှ နည်းပညာသူဌေးများက ဝယ်ယူလိုက်သည်။ အမေရိကန်တွင် ရုံးခွဲအဆင့်လောက်သာ ဖွင့်ထားတော့သည်။ ရေမြင့်လျှင် ကြာတင့်ဆိုသလို မြန်မာနိုင်ငံသားများလည်း မျက်နှာပွင့်တော့သည်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတိုင်းသည် မြန်မာပတ်စ်ပို့ကို ဆိုက်ရောက်ဗီဇာပေးထားသည်။ ဘာမှကြိုလျှောက်စရာမလို ရောက်တာနဲ့ immigration ကိုဝင် ပတ်စ်ပို့ ပြလိုက်သည်နှင့် အိုကေ။ ရှိုးမန်းနီး ဘာညာပြစရာမလို၊ နိုင်ငံသားတိုင်းတွင် ပတ်စ်ပို့ နံပါတ်တခုစီအတွက် ဘဏ်အကောင့်ရှိထားပြီသား။ ဘယ်နိုင်ငံ ဘယ်ဘဏ်မှာမဆို ပိုက်ဆံထုတ်လို့ရသည်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကလည်း ငွေကြေးယူနစ်ကို ကျပ်ဖြင့်သာ တွက်၍ပြောတော့သည်။ ဘယ်နိုင်ငံသွားသွား ပတ်စ်ပို့ အနီရောင်လေး မြင်လိုက်တာနဲ့ အိုကေ။ မြန်မာနိုင်ငံသားများကလည်း တချိန်က နာမည်ကြီးခဲ့သော အမေရိကန်ကို သွားလည်လေ့ရှိသည်။ စစ်ကြောင့် ပျက်စီးခဲ့သည့် အပျက်အစီးများကို အမှတ်တရသွားကြည့်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ အမေရိကန်များသည် ပတ်စ်ပို့ အနီရောင်မြင်လျှင်လန့်လေ့ရှိသည်။ သူတို့စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ၏ သူဌေးတော်တော်များများမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှဖြစ်ကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ တော်သေးတာတခုက မြန်မာနိုင်ငံက အမေရိကန်ဒေါ်လာကို လက်ခံနေသေးတာပင်။ ဒေါ်လာ၊ ပေါင်၊ ယူရိုစသည့် တို့နှင့် အိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံ ငွေကြေးလောက်သာ မြန်မာက လက်ခံသည်။ ဒါတောင် Currency Exchange မှာလဲပြီးသုံးရသည်။ တိုက်ရိုက်သုံး၍မရ။ မြန်မာကျပ်ကတော့ ဘယ်နိုင်ငံမဆို လဲ၍လည်းရ၊ တိုက်ရိုက်သုံး၍လည်းရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသားမျာ မျက်နှာပွင့်သလောက် မြန်မာနိုင်ငံထဲ ဝင်ချင်သူများအဖို့ အတော်ခက်ခဲသည်။ နိုင်ငံအတွင်းရှိ နိုင်ငံသားတယောက်က ထောက်ခံပေးမှသာလျှင် ဗီဇာရနိုင်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်သူများအဖို့ ဘုန်ကြီးများဆီ အပူကပ်ကာ ဗီဇာရအောင်လျှောက်ပြီး နေလျှင်လည်း ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်နေလေ့ရှိသည်။ သို့သော် သူတို့ အပြောအရ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းများမှာ ဂျပန်၊ အမေရိကန် နှင့် အင်္ဂလန်ရှိ ဟော်တယ်များထက် ပိုသာသည်ဟုဆိုကြသည်။ ဗီဇာက တလခန့်သာရလေ့ရှိရာ ထိုအတောအတွင်း အလုပ်လေးတခုရအောင် လျှောက်ကြရသည်။ ယခင်က ဘုန်းကြီး ကပ္ပိယလုပ်လိုသူများအတွက် ကပ္ပိယဗီဇာပေးသော်လည်း အကြံအဖန်များလာသဖြင့် ထိုဗီဇာထုတ်ပေးခြင်းကို ရပ်နားထားရသည်။ ယခင်က အာဆီယံ နိုင်ငံအဖွဲ့ဝင်များကို ဗီဇာစည်ကမ်းများလျော့ပေါ့ပေးရာ စင်ကာပူ၊ မလေးမှ အကြံအဖန်များဝင်လာခြင်း၊ အိုဗာစတေးများ များလာခြင်းတို့ကြောင့် ပြန်လည်တင်းကျပ်ရသည်။ မလေးကကောင်တွေဆိုပိုဆိုး မြန်မာစကားလဲ ကောင်းကောင်းမတတ်၊ ရှိုးမန်းနီးလဲ မပါသလောက်၊ လာတော့ တိုးရစ်ဗီဇာ။ ဒါကြောင့် ဟိုတလောက ဂျာနယ်မှာဖတ်လိုက်ရတာ လေဆိပ်ကပြန်လွှတ်ရတာ အယောက် ၂သောင်းကျော်သွားပြီဆိုပဲ။ ခုနက စလုံးသားလောက် မြန်မာစကားပြောတတ်မှ အလုပ်ရနိုင်သည်။ မဟုတ်လို့ကတော့ လာပြီး ငွေကုန်လူမောတာပဲ အဖတ်တင်မယ်။ အားကစားဘက်ကိုကြည့်ဦးမလား။ လစာအကောင်းဆုံးရသည့် နေရာဆိုလို့ Myanmar National League (MNL) သာရှိသဖြင့် ဘရာဇီး၊ အာဂျင်တီးနား၊ ဂျာမနီစသည်တို့မှ ဘောလုံးသမားအားလုံး လာရောက်ကစားရသည်။ MNL တွင် လာမကစားဖူးလျှင် ကမ္ဘာ့အဆင့် ဘောလုံးသမားဟု မသတ်မှတ်ကြ။ ထိုဘောလုံးသမားများကလည်း မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်လိုကြသဖြင့် အလုအယက်လျှောက်ထားနေကြရာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားတိုင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံသားများပင်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲကိုလည်း အခြားနိုင်ငံများတွင် လက်ခံကျင်းပနိုင်လောက်အောင် ပြည့်စုံခြင်းမရှိသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ခံကျင်းပရသည်မှာ (၃)ကြိမ်ဆက်ရှိပြီး ထို(၃)ကြိမ်စလုံးဗိုလ်စွဲခဲ့သည်။ ဆက်သွယ်ရေးဘက်ကိုကြည့်ဦးမလား။ တနိုင်ငံလုံးအင်တာနက်မမိတဲ့ နေရာမရှိ။ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားမှသည် ပူတာအို ရေခဲတောင်အထိ အင်တာနက်ရသည်။ အနှေးဆုံး 1Gbs to အမြန်ဆုံး 10Gbs အထိရသည်။ ရန်ကုန်တမြို့လုံးမှာ မြေကြီးဆိုလို့ ပန်းခြံထဲ သွားကြည့်မှပဲမြင်ရမယ်။ ကျန်တဲ့နေရာက ကတ္တရာ၊ ကွန်ကရစ်အပြည့်ခင်းထားတာ။ ကော့သောင်းမှ ပူတာအိုအထိ ကျည်ဆန်ရထားဖောက်ထားသည်။ ရန်ကုန်မြို့ထဲတွင် မောင်းသူမဲ့ တက္ကဆီများပြေးဆွဲပေးသည်။ အခြားဘယ်နိုင်ငံမှ မရှိ။ စစ်တွေဖြစ်ပြီးနောက် နူကလီးယားကြောင့်လားမသိ။ ရာသီဥတုကတော့ အတော့ကိုပြောင်းလဲလာသည်။ အတော်လဲပူလာသည်။ ခုတောင်အတော်ပူနေသည်။ "ဟေ့ကောင်... ထ... ထ....။ မင်းကလဲ မီးပျက်ပြီးမှောင်ကြီးထဲအိပ်နေတယ်။" သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ၏ လှုပ်နိုးမှုကြောင့်နိုးသွားသည်။ အော်... အင်တာနက်က 10MB လောက်ရှိတဲ့ ဖိုင်ကြီး ဒေါင်းလုပ်ဆွဲတာ စောင့်ရင်းအိပ်ပျော်သွားတာ အိပ်မက်တွေတောင်မက်နေတယ်။ မင်းကိုလာပြောတာ မြန်မာအသင်း ဒီနေ့ပွဲရှုံးပြီး အုပ်စုကလှည့်ပြန်လာရပြီလို့။ ပြောƞ
« Reply #3 on: June 06, 2011, 10:07:06 AM »
A: YOU NOT LISTENING! Food are fried these day in vegetable oil.. In fact, they permeated by it. How could getting more vegetable be bad for you?!?
Speaking English is apparently what kills you.Eat and drink what you like
« Reply #4 on: June 07, 2011, 09:15:12 AM »
တစ်ရံရောခါ ၊ ဤနေရာမှ ၊ စိတ်မှာညစ်ထပ် ၊ သောက်ညင်ကပ်လို့ ၊ ဝေးရပ်တစ်မြေ ၊ ပြေးထွက်လေသော ၊
အင်တာနက်အား ၊ စိတ်မှာထား၍ ၊ မေတ္တာ ပို့သလိုက်ပါသည် ။
ဆွေးလို့ပြာကာ ၊ အွန်လိုင်းမှာလည်း ၊ မလာတာကြာ ၊ စိတ်မပါထင်ပြီး ၊ ကြိတ်ကာကြူ (Q)
ထား ၊ မဒီများလည်း ၊ တစ်ခြားနောက်ကို ၊ ပါတော့မည်ထင့် ၊ ရင်မှာနင့်သည် ။
ဒီနေ့စိတ်ကောက် ၊ နက်ဖြန်ရောက်မှ ၊ စိတ်ကောက်ပြေရေး ၊ ချော့မယ်တွေးပြီး ၊ ထိုဒေး (day) ညမှ၊
နက် ကကျတော့ ၊ ချစ်သူကမုန်း ၊ ဘလော့(block)ဦး (အုံး) မှာ ၊ ပူနေတာမို့ ၊ ဆပ်ပြာသည်
မ ၊ လင်ပျောက်ရသို့ ၊ ဒုက္ခတွေနဲ့ ၊ တစ်မှိုင်မှိုင်တွေ ၊ တစ်တွေတွေငေး ၊ တစ်ငေးငေးငူ ၊တစ်
အူအူဆွေး ၊ ၀မ်းဗိုက်ရေးထက် ၊ လွမ်းရေးသာသည် ။ ရင်မှာမျက်ရည် ခါခါလည် ။
ဝေးလို့မှာတာ ၊ ကိုအင်တာရေ ၊ လာပါအမြန် ၊ သင်မမှန်လို့ ၊ ကော (call)သံတိုး
တိတ် ၊ အဆောင်ဆိတ်နေပြီ ။ ဓားကိုဆွဲထုတ် ရန်သူခုတ်ဖို့ ၊ အဟုတ်ကြံမှ ၊ နက်
ကကျသွား ၊ ဟီးရိုး(Hero)များလည်း ၊ တစ်အားဆွေးသည် ။ နက်ကမလာ ၊ လန်
(lan)ပေါ်မှာလည်း ၊ ကောင်တာပစ်ရ ၊ လက်ညောင်းလှပြီ ၊ ဟိုဆောက်ဒီဝယ် ၊
ဂျင်နရယ် (General)လည်း ၊ စိတ်ဝယ်မရွှင် ၊ မတိုက်ချင်ဘူး ။ အွန်လိုင်းဟီးရိုး ၊
တန်(Dan)မတိုးဘူး ၊ ကံဆိုးချက်က ၊ ချစ်သူမယုံ ၊ ဖုန်းဖိုးကုန်လည်း ၊ သူယုံမလာ
၊ စိတ်ညစ်ပါသည် ။ ဘီယာကဒ်တွေ ခါခါဝယ် ။
ပြေးလို့လာပါ ၊ မျှော်နေတာလည်း ၊ ရင်မှာထိတ်ရ ၊ ဒီလိုညများ ၊ လာမလားလို့
အိပ်ငြားမပျော် ၊ အိပ်ရာပေါ်ဝယ် ၊ မပျော်မလှုပ် ၊ အမြီးကုပ်၍ ၊ လွမ်းရုပ်တွေဆင်
ကော်နက်ရှင်စောင့် ၊ တစ်တောက်တောက်နှင့် ၊ ဘောက်မဲ့ကြောင့်များ ၊ ဒီစီ
(dc) များဖြစ် ၊ တဗျစ်တောက်တောက် ၊ တလျှောက်လျှောက်တွေး ၊ တစ်
တွေးတွေးပူ ၊ သင်သာလူဖြစ် ၊ လည်ပင်းညှစ်လို့ ၊ အလစ်ကိုချောင်း ၊ တုတ်
ကောင်းကောင်းနဲ့ ၊ ရိုက်မောင်းဆုံးမ ၊ တွေ့ကြတာပေါ့ ၊ စိတ်ပေါ့ဖို့ရေး ၊ကြံ
ကာတွေးလည်း ၊ နှုတ်ဝယ်ခါခါ ၊ ပြောနေပါသည် ။ အင်တာနက်ရေ လာပါကွယ် ။
ထိပ်ကိုအတိုကိုက် ဒွေး ပါလို့လည်းမကြွားနှင့် ။
စိတ်ကိုအလိုလိုက် ဝေးရာသို့ သွားက ၊ အသွားမတော်တစ်လှမ်း ဒုက္ခလမ်းသို့မြန်းလိမ့်မည် ၊ ထိပ်ကိုအ တိုကိုက် ဒွေး ပါလို့ကြွားက ၊ တစ်အားအော်ငေါက်ငမ်း မမိုးမိုးက ရမ်းလိမ့်မည် ။ အသွားမတော်ပဲ မျဉ်း ကျားမှ မကူးက ယာဉ်ထိန်းရဲနှင့်မိတတ်သည် ။ စိတ်ထင်ရာသွားပြီး ၊ ညကြီးအမှောင် ၊ ပတ္တရောင်နှင့်တိုး ဂျေးသို့ဂိုးရတတ်သည် ။ အကြွားမတော်ပါက တအားအော်ခံရပြီး ၊ လက်ဝါးနှင့်နီးတတ်သည် ။
ကံယုံစားပြီး သံပုံသို့လည်းမသွားနှင့် ။
ဆန်ဆုံစားပြီး ကံကုန်သွားလို့ ခွဲသွားတော့ ကျန်ခဲ့သူက လွမ်းရသည် ။ ကံယုံစားပြီး သံပုံကြားသို့ အရဲ သွားတော့ သံဆိပ်ထူကာ နွမ်းရမည် ။ ဆန်ဆုံစားပြီး ကံကုန်လို့သွားသည် ပြောရအောင် အသင်နှင့် ကျုပ်တို့ကြား ဆက်ဆံရေး အလှဆင်ပေးဖို့ ၊ မပြတ်အမှန်းပေး လစဉ်းကြေး ရှိပြီးသား တစ်မုံ့ ၊ နက်ရရေး ကို ၊ မနက်ညတွေးပြီး ၊ မဟန်တာကြောင့် ၊ အမြန်လာပါဟုသာ ပြောချင်ပါသည် ။ ကံကိုယုံပြီးလည်း ဘောပွဲတွေ အတင်းလောင်း ၊ မောင်းမပေါက်ပဲ ၊ ချောင်းပေါက်မတက် ၊ အကြွေးတောင်းခံရပေမည် ။ကံမကောင်းပါက ချစ်သူကိုပင်မှားပြီး ဘလော့ပေးမိတတ်၍ စိတ်ကွက်ခံရပါမည် ။ ကံကောင်းပါက လည်း မနက်ကဆိုထားသော ရည်းစားစကား လူမှား၍ ညနေတွင် အဖြေမြင်ရတတ်ပါ၏ ။ သို့ပါ၍ ဆန်မပါ ၊ ကံဗလာနှင့် လာလည်း ကျိတ်မဆဲပါ ။ လာသာလာပါ ဘာညာမပါလည်း ကိစ္စမရှိပါ ။
မျှော်ရလွန်းလို့ လည်ပင်းလည်း ပဲရစ်မျှော်စင်ဖြစ်တော့မည်
အော်ရလွန်းလို့ ရောခ့်ကာများရဲ့ စီးပွားရေးလည်းထိခိုက်တော့မည် ။
မျှော်ထားလည်းမလာသည်က ကိုရီးယား ဇာတ်လမ်းတွဲ ၊ မမျှော်ထားလည်း လာသည်က ကြော်ငြာ ၊ အော်တိုင်းလည်းမသာသည်က ရည်းစားဟောင်း မင်္ဂလာဆောင်က သီချင်း ၊ မအော်ခိုင်းပဲ သာသည်ကအလှူအိမ်က ဗြောသံ ၊ သို့ကလိုကြောင့် ကိုရီးယားကားလို ဇာတ်သိမ်းကို မျှော်လင့်ချက်တွေပေးပြီး အကြီးအကျယ် busy နေသောသင့်အား ၊ ရင်ကွဲပက်လက် အသံဖြင့် ကျုပ်တို့ အော်ကြီးဟစ်ကျယ် call နေပါတယ် ၊ ကျေးဇူးပြုပြီး ရောက်ရာအရပ်က အမြန်လာ Answer ပေးလှည့်ပါ ။
တံခွန်မရှိသောဘုရား ၊ အလံမရှိသောရထား
လင်မရှိသော မိန်းမ မတင့်တယ်ဟု ဆိုစကားရှိ၏ ။
အလားတူ အင်တာနက်မရသော ကွန်ပျူတာမှာလည်း ၊ Core2Duo ပင်ဖြစ်လင့်ကစား မတင့်တယ်ပေ၊ ထိုနည်းတူ အင်တာနက်မရသော ကွန်ပျူတာမှာ ၊ အတောင်ပါပြီး မပျံသန်းနိုင်သော ပင်ဂွင်းငှက်ကဲ့ သို့ ယက်ကန်ယက်ကန်ဖြစ်နေကြောင်း ထပ်လောင်းသိစေချင်ပါသည် ။
မျှော်တာများလို့ ဘလော့ဂါ(Blogger) များလည်း ၊ ပို့စ်မတင်လို့ တစ်မျိုးထင်ခံရတော့မည် ၊ ဟီးရိုးဂိမ်မာများလည်း တန်(Dan)တက်ဖို့ ရန်သတ်ချင်လှပြီ ၊ ဂူးဂဲလ်ချက် သမားလည်း အရူးအမဲနှပ်စားသို့ လွမ်းနေ သည် ၊ ရဟူး မက်ဆင်ဂျာကိုလည်း အထူးမမြင်တာကြာပြီ ၊ နက်လော့ (Netlog) မှာ လက်ဆော့ချင်သူ များလည်း ၊ အရက်မော့နေရပြီ ၊ ဒေါင်းလုပ်ချထားသော ဇာတ်ကားများလည်း ကုန်နေပြီ ၊ သီချင်းအသစ် ကို စာရင်းမလှစ်ရတာလည်း ကြာပြီ ၊ ဘောပွဲသတင်းဝဘ်ဆိုဒ် မဖတ်လိုက်ရတာကြာလို့ ဟာနေပါသည်၊ သို့သော်လည်း သင့်အားအ၀ါကဒ်နှင့် တစ်ခါထပ် သတိပေးပြီး၊ လယ်ဗယ်ညီအောင် ပယ်နယ်တီလည်း မတောင်းပါ ။
အဆောင်သားအားလုံး “ အောက်အီးလည်းမတွန် ၊ အစာလည်းမစား ၊ ကော်နက်ရှင်ကိုလွမ်းလို့လား” ဟုမေးရမလောက်ဖြစ်နေသည်ကို မြင်စေချင်ပါသည် ။ သို့ဂလိုအရေးကြောင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုဘေးချိတ်ပြီး ကျုပ်တို့အိပ်ရေးပျက်အောင် အမြန်လာပါဟု ၊ ကြားရာအရပ်သို့ တအားမှာလျက်ရှိနေပါသည် ။ တစ်ခြား အဆောင်တွေမှာ အလန်ဆုံးဆိုတဲ့ အမြန်နှုန်း(Speed)ကို မမှီလည်းနေပါ ၊ အသင့်အမြန်နှုန်း လိပ်နဲ့စပ် လည်း အကျင့်တန်မုန်း စိတ်ဓာတ်မပျက်ပါ ၊ အကြောင်းမဟုတ်ပါက ဒေါင်းလုပ်(download)လည်း မချ တော့ပါဟု ကျုပ်တို့အာမခံပါတယ် ။ တောင်းဆိုး ပလုံးဆိုးသာ ပစ်ရိုးထုံးစံရှိပေမယ့် ကော်နက်ရှင်ဆိုး ၊ စပိ (Speed)ဆိုးကိုတော့ ပစ်ရိုးထုံးစံမရှိပါ ။ သင်ဘယ်အချိန် ဆိုင်းနီးအပ်(singing up)မလဲလို့ ပဒိုင်းသီးနှပ်စားထား သလိုမျှော်နေပါတယ် ၊
နေ့ညတွင်တွင် ၊ ကော်နက်ရှင်ကို ၊ ထင်မြင်ယောင်ယမ်း ၊ တွင်တွင်လွမ်းကာ ၊ ရင်မှာလွမ်းရင် ၊
မျှော်တိုင်းမြင်လို့ ၊ လက်ညှိုးညွှန်ရာ ၊ ကော်နက်ရှင် ဖြစ်ပါစေသား အရှင်ဘုရား လို့ ၊ ဒတ္တ ရဲ့
ကဗျာစာသားလို ၊ အိပ်မပျော် စားမ၀င် ၊ ကော်နက်ရှင် ကိုသာလွမ်းနေပါသောကြောင့်
အင်တာနက် ရောက်လေရာသို့ ၊ ရင်နာလျက် တစ်ခေါက်တစ်လေလာဖို့ ၊ သစ္စာကမ္ဘာ တည်ရန်၊
Credit @ double t
« Reply #5 on: June 07, 2011, 09:37:27 AM »
ကိုဒေါက်လမ်း ဘယ်ျဌာနေများရောက်နေလို့ ယခုလို့ တမ်းတကြေကွဲနေတာပါလိမ့်။။။
မဟုတ်မှ လွဲရော(မဟုတ်မှတော့ လွဲပီပေါ့) ဘန်းကျော်ကိုရောက်နေတာတော့မဖြစ်တန်ရာ...............။
ကြည့်ရတာ ဘန်းကျော်ဌာနေက ကောင်မလေးနဲ့ မျဉ်းကြောင်း( အွန်လိုင်း) ပေါ်မှာမတွေ့ရလို့များ စိတ်နာပီး ရင်ဖွဲ့စာတမ်းတွေပေါ်ထွက်လာဟန်တူပါရဲ့။
« Reply #6 on: June 07, 2011, 10:33:41 AM »
ကျနော်က ဘန်းကျော်မှာမဟုတ်ပဲ ဘန်းဘေးနားမှာရောက်နေသူပါ။
ဘန်းကျော်က လူတွေကို ကိုယ်ချင်းစာလွန်းလို့ပါဗျာ။
« Reply #7 on: June 09, 2011, 04:34:12 AM »
ကြိုးစားနေသရောင် ထင်စေ၏။ စာရွက် မပါတဲ့သူကတော့ ကော်ဖီဆိုင် သွားမည့်
အများထင်အောင် ကွန်ပျူတာကို သဲကြီးမဲကြီးကြည့် ကာ လုပ်ပါ။ အများအမြင်တွင်
တင့်တယ်၏။ အလုပ်မရှိက မိမိ ပါစင်နယ် မေးချက်ခြင်း။ မိမိ လစာတွက်ခြင်း
၃။ လုံးဝအလုပ်မရှိသည့်အခါ မိမိ ၀က်ဘလော့၏ တန်းပလိတ်ပြင်ခြင်း။ ဘလော့
နှင့်ပတ်သက်သော နည်းပညာ လေ့လာခြင်များ လုပ်ပါ။ သင်၏ အထက် အကြီးကဲ (သို့)
သဌေးမှ တွေ့ရှိသွားပါက ရှေ့လာမည့် ပရောချက် အတွက် နည်းပညာ ဆော့ဝဲအသစ်များ
လေ့လာနေသည်ဟု ဖြေပါ။ သင့်အားချီးကျူး ပေလိမ့်မည်။
၄။ သင်၏စားပွဲအား စာရွက်များ ဖိုင်များဖြင့် ရှုပ်ပွနေပါစေ။ ဧကန် ထိုသူသည်
အလုပ်များသောသူဖြစ်ပေသည်။ အလုပ်ဖေါ်တစ်စုံတစ်ဦး သင့်စားပွဲနား ကပ်လာပါက
“အရမ်း အလုပ်များတာ.. ရှင်းဖို့အချိန်မရဘူး” စသည် အိုက်တင် ဖြင့် ပြောပါ။
ထိုသို့ပြောရင်း စာရွက် တစ်ခုအားရှာနေပါ။ လက်တစ်ဖက်က မောက်စ်ကို မလွှတ်
၅။ အလုပ်အား အခြားသူများထက် စောရောက်အောင် လေ့ကျင့်ထားပါ။ (အီးမေးချက်ပါ)
သကဲ့သို့ အခန်းထဲမှ နောက်ဆုံးထွက်ပါ။ (ဂျီ တော့ခ် မှ သူငယ်ချင်းများအား
From Chocolate City Blog, posted by may thuzar kyaw
« Last Edit: June 09, 2011, 04:44:23 AM by drlanmadawthar »
« Reply #8 on: June 09, 2011, 10:50:26 PM »
မျက်မှန်လေးတပ်ပြီး ကွန်ပျူတာကို စူးစူးစိုက်စိုက်ကြည့်
အဖြူအမည်းဘဲ ပါတဲ့ ပေ့ခ်ျတွေ ဘရောက်စာပေါ်မှာ တင်
ပီးမှ အောက်လေးမှာ ဂျီတော့ခ်ကို သေးသေးဖွင့်ပီး
မျက်မှောင်ကျုံ့ပြီး သဲကြီးမဲကြီး စာရိုက်
ထမင်းစားချိန်ကျရင် ၅ မိနစ်တန်သည် ၁၀ မိနစ် တန်သည် စောင့်ခိုင်း
« Reply #9 on: June 12, 2011, 01:42:03 AM »
ဖိုးသူတော်ဆိုတာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ ဆွမ်းခံဆွမ်းသိမ်း၊ ဘုန်းကြီးဝေယျာဝစ္စ ကျောင်းဝေယျာဝစ္စလုပ်ပေးရင်း နေတဲ့ များသောအားဖြင့် သားထောက်သမီးခံလည်းမရှိ၊ ဘုန်းကြီးဝတ်ဖို့ရာကျတော့လည်း သီလမနိုင်၊ စာပေကျန်းဂန်မတတ်တဲ့သူတွေပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့က နေကုန်နေခန်းကျောင်းမှာ ရွတ်သံဖတ်သံတွေကြားနေတော့ ပါဠိပါဒ်သားလေးလည်း မတောက်တခေါက်တော့ တတ်တာပေါ့။ ရေရေရာရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စာဆိုတာ နည်းနည်းလေးတတ်လာရင် ရေးချင်ချွတ်ချင်တဲ့ ၀ါသနာလည်းထုံလာတာမို့ ဇရပ်နံရံ သုဿာန်အုတ်ဂူတွေပေါ်မှာ တောင်တလုံး မြောက်တလုံး လျှောက်ရေးတော့တာပဲ။ သူတို့ရေးတဲ့စာတွေကလည်း ဖိုးသူတော် အချင်းချင်းသာ နားလည်နိုင်တာ။ ဟိုမရောက်ဒီမရောက်ရယ်။ တခါက ဖိုးသူတော်တစ်ယောက် သေတဲ့အခါ သူ့အခန်းထဲက စာတစ်စောင်ထွက်လာသတဲ့။ ရေးထားတာက “ထသောရာဇ သုဒ္ဒဿကို မုနိသုဒ္ဒာ ဒယေးယျာတိ” တဲ့။ ဘုန်းကြီးလည်း အနက်မဖော်နိုင်ဘူး။ တခြားရွာကျောင်းက ဖိုးသူတော် ခေါ် အဖတ်ခိုင်းမှ ရှင်းသွားတယ်။ “ထသောရာဇ ထနှင့်စသောမင်း = ထမင်း၊ သုဒ္ဒဿ = တစ်ဆယ့်ခြောက် = ၆ + ၁၀၊ ထမင်းခြောက် အချိန်တစ်ဆယ်ကို၊ မုနိသုဒ္ဒာ မိနုနှင့် သာဒုတ်တို့အား ဒယေးယျာတိ ခွဲဝေပေးခြမ်းပါလော့” တဲ့။ သူ့တူတွေတူမတွေကို ဆွမ်းကျန်အခြောက်လှန်းပြီး အမွေခွဲပေးထားသကိုးဗျ။ ခုခေတ်မှာလည်း စာမျက်နှာပေါ်မှာ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဖိုးသူတော်လက်ရာတွေ ဖောချင်းသောချင်း ဖတ်နေရပြီး အဲဒါတွေကို ဘုရားရှိခိုးအမှတ်နဲ့ ခုနစ်အိမ်ကြား ရှစ်အိမ်ကြား လိုက်အော်ဆိုနေရင် ရှက်စရာကြီးမို့လို့ အနက်ပြန်ပေးလိုက်မယ်နော်။ တော်ကြာ ငရဲငအုံတွေ ကြီးနေမှဖြင့်။ တို့ကတော့ ဖိုးသူတော်အချင်းချင်းမို့ ပါးစပ်ဟလိုက်တာနဲ့ အူဘယ်နှစ်ခွေ မြင်ပြီးသားပါကွယ်။ ဒီလောက်နိဒါန်းချီနေရင် ဘာပြောတော့မလဲ ပေါက်ပြီလား။ မမီသေးရင် စကိတ်ဘုတ်ပေါ်တက် လေယာဉ်ပျံစင်းလုံးငှားပြီးသာ လိုက်ခဲ့ပေတော့။
ငယ်ငယ်ကဖတ်ဖူးတဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကို မှတ်မိသလောက် ပြန်ရေးပြပါဦးမယ်။ အစအဆုံးတော့ မရတော့ဘူး။ အိုလှပြီလေ။
လုပ်ပါ နှုတ်ပါ ထုတ်ပါဦး
ကျွန်တော့်ဖင်က လောက်စာလုံး .....” ဆိုတာလေ။
ဇာတ်ကြောင်းကတော့ ဖင်ဝမှာ လောက်စာလုံးတစ်နေတဲ့ ကျီးကန်းကလေးကို ဒေါက်တာဇီးကွက်က ရေအိုင်ထဲစိမ် ရွှံတွေပျော်အောင်စောင့်ပြီး ထွက်သွားစေတဲ့အခါ ကျီးမသားက ဆေးတစ်လုံးမှ မပေးလို့ ဆေးကုတာမဟုတ်ဘူးဆ်ုပြီး ညစ်ကန်ကန်တဲ့အကြောင်းပါ။ ဒီပုံပြင်ကလေးမှာ ပြောချင်တာက ဆေးကုထုံးဆိုတာ သန်းခေါင်းလောက် လောက်စာလုံးလောက်ကနေ လက်ခုပ်ကြီးနဲ့ အပြည့်ဆေးတွေပေးမှ ဆေးကုတယ်လို့ မခေါ်ဘူးလို့ ရှင်းပြချင်တာပါ။ လည်ချောင်းဝမှာ ကျပ်စေ့ကြီးတစ်နေတဲ့ကလေး၊ နှာခေါင်းထဲမှာ မြေပဲဆန်ကြီးဝင်နေတဲ့ကလေး၊ နားထဲမှာ ပိတုန်းကြီးထုတ်မရတဲ့ကလေး၊ ဘောင်းဘီဇစ်ညပ်လို့ တန်းလန်းကြီးငိုနေတဲ့ကလေးတွေကို မဟော်သထာကိုင်လျက်မွေးလာတဲ့ နတ်ဆေးကြီးနဲ့ ကုလို့မရပါဘူး။ ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ရင် ဘာမှ မခက်ဘူး။ ယူပစ်လိုက်သလို ချက်ချင်းပျောက်တယ်။ တကယ်လည်း ယူပစ်လိုက်ပေသကိုး။ သူလုပ်တော့လည်း လွယ်လွယ်လေးပါလားဟဲ့။ ဒါများ ဘာခက်တာမှတ်လို့လို့ထင်ရင် စမ်းကြည့်စမ်းပါလေ။ ဒီအလုပ်မျိးကို သိန်းချီတန်တဲ့ ဆေးတွေမသောက်ရလို့ တန်ဖိုးမရှိဘူး။ ကုထုံးမမြောက်ဘူးလို့ထင်နေရင် တနေ့ကိုယ်တိုင် ငါးရိုးမျက် လက်တိုဖြစ်လာတဲ့အခါ သိပါလိမ့်မယ်။
တခါတခါမှာတော့ ဆေးမပေးယုံတင်မဟုတ်ဘူး။ ဘာမှမလုပ်ပဲ ပစ်ထားရတာကိုက ကုထုံးခင်ဗျ။ အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ပြီး အချိန်တစ်ခုစောင့်နေရတာလည်း ရှိတာပဲ။ ဆရာဝန်ဆိုတာ ဘယ်ရောဂါကို ဘာလုပ်မှဖြစ်မယ်လို့ သိရသလိုပဲ ဘယ်အချိန်မှာတော့ ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးလို့လည်း သိရပါတယ်။ လောက်ကိုင်မှာတုန်းက ကလေးမလေးတစ်ယောက် အိမ်ပေါ်ကလိမ့်ကျပြီးခေါင်းမှာ အာလူးသီးထွက်သွားလို့ ဆေးရုံလာပြပါတယ်။ သတိလည်းရတယ်။ အန်လည်းမအန်ဘူး။ နည်းနည်းလေး မှိုင်သွားတာတစ်ခုပဲ။ မိဘကတော့ စိတ်ပူတာပေါ့လေ။ အဖေလုပ်တဲ့သူက လားရှိုးမှာ အရာရှိဆိုတော့ သူ့ဆီခေါ်ချင်တာပေါ့။ “လွှတ်သာလွှတ်လိုက်၊ မြန်မြန်သာလွှတ်လိုက်။ ပြဿနာတက်ရင် ကိုယ့်ခေါင်းကျနေမယ်” လို့ အတင်းကို တိုက်တိုက်တွန်းတွန်း လုပ်နေသူတွေကို ဆန့်ကျင်ပြီး “ဟိုရောက်ရင်လည်း စောင့်ကြည့်မှာ။ ဒီမှာလည်း စောင့်ကြည့်နေသားပဲ။ လိုတဲ့အခါလွှတ်မယ်” ဆိုပြီး ကိုယ်တိုင်ပဲ စောင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ အချိန်တန်လို့ အားလုံးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ ပြန်ဆင်းသွားတဲ့အခါ ကိုယ့်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောင် ပြောမသွားပါဘူး။ ဘာမှလည်းလုပ်မပေးဘူးလို့ ထင်ပုံရပါတယ်။ မလွှဲပဲ ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်ပေးလိုက်လို့ ကားစင်းလုံးငှားရမယ့်ဒုက္ခ၊ ဆိုင်ပိတ်လို့ထိခိုက်မယ့်စီးပွား။ သွားရေးလာရေး နေရေးထိုင်ရေးခက်မှာတွေ သက်သာသွားတယ်ဆိုတာ တွေးမှ မတွေးမိပဲကိုး။ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့အမှု ကိုယ့်ဘာသာကျေနပ်နေတာ သူတို့သိဖို့မလိုပါဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာ သတိထားမိသွားတာကတော့ ဘာမှမလုပ်တာဟာလည်းပဲ ထိရောက်တဲ့ကုထုံးတစ်ခုပဲလို့။
ဒါပေမယ့် တချို့လူနာတွေဘက်မှာတော့ ရောဂါကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဝေဒနာအပြင် ဥစ္စာကြောင့်စိတ်ထဲမှာ အသည်းတယားတယားဖြစ်နေရတဲ့ ခံစားချက်ကလည်းရှိနေလေတော့ တဗျင်းဗျင်း ကုတ်ထည့်လိုက်ရမှပဲ အယားပြေသွားမယ့်ပုံရှိပါတယ်။ ဒါလည်း ဘာခက်တာလိုက်လို့ကွယ်။ ဆေးကုရင်း ကုတ်တံရောင်းပေးလိုက်ရင် သူလည်းအယားပြေ ကိုယ်လည်းနားအေးပေါ့။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်များဟာ လူပြိန်းကြိုက၊် ခေါ်တောကြိုက်၊ တောကတက်လာတဲ့ သူကြီးကတော်ကြိုက်ကုထုံးကလေးတွေကိုလည်း ရောဂါကို ကုဖို့မဟုတ်သော်ငြား ယားနာကိုကုဖို့ သိထားဖို့လိုလာတာပေါ့။ အဲဒီအတတ်တွေက ကျွန်တော်တို့ အလုပ်ထဲက မြန်မာဆရာဝန်တွေထက်၊ အပြင်ဆေးခန်းက ဈေးကွက်ထဲက သမားဟူးရားကြီးတွေ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေက ဆေးကုစားတဲ့ ယောဆရာကြီးတွေက ပိုပြီးတတ်ကျွမ်းပါတယ်။ လွယ်လွယ်လုပ်ပေးရင် တန်ဖိုးမသိတဲ့သူတွေကို ခဲရာခဲဆစ် ပညာစွမ်းတွေပြရတာပေါ့။ ခုနတုန်းက လည်ချောင်းထဲကကျပ်စေ့ကို ဆတ်ကနဲ ကောက်ထုတ်နိုင်သော်ငြား ဗီဒီယိုကင်မလာကြီးနဲ့ ဖေတို့မေတို့ကို အသည်းတယားယား ဘုရားဘုရားနဲ့တနေအောင်ပြထားပြီး နိုင်ငံခြားက ဒေါ်လာသိန်းချီတန်တဲ့ စက်ကြီးနဲ့ ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင် ပွဲသိမ်းပြီ စိုးရေ။ ဘောက်ချာပို့လိုက်မယ်။ သွေးကျဆေးလေးသောက်ပြီး ဖတ်လိုက်နော်ပဲ။ လေးစားပါတယ်ဗျာ။ အဲဒါလည်း ပညာပဲဟာ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီဂေါ်ရင်ဂျီကြိုက်ဆရာကြီးတွေနဲ့ ယှဉ်ပြီး အလကားမတ်တင်း ရွှံ့ရုပ်နဲ့ ကြွက်သေအောင်ကုပေးနေတဲ့သူတွေကို သူတိုလောက်မတတ်တဲ့ အနုတ်စုတ်ဂုတ်စုတ်ဆရာတွေပါလားရယ်လို့ အထင်သေးလာရင်တော့ ကြက်တူရွေးပြောသလို “နင့်ဘကြီးက နင့်ထက်တောင် တတ်သေးသကွယ်” လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
စိတ်ဆိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ အစကတည်းက ပြောခဲ့ပါတယ်။ ရှေ့နေလိုက်နေတာပါလို့။ သိတယ်မဟုတ်လား။ ခုတလော ဆရာဝန်တွေကလည်း တာစားနေပါဘိသနဲ့။ မီဒီယာအပေါင်းတို့၏ ပို့သသောမေတ္တာတွေကလည်း ရှိနေလေတော့ ကြည်စေအေးစေ ဖြစ်သွားအောင် ဆယ်တန်းအောင်စရာမလို၊ အပျိုဖြစ်ရမည်။ ရုပ်ချောရမည်။ဆိုပြီး ကြော်ငြာနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ ဂျာနယ်လစ် သူငယ်မကလေးတွေကို အီစီကလီထုပြီး မျှောထားရင်ကောင်းမလားလို့။ တို့လည်းဘ၀သစ်ကို ပြန်စလို့ရပါတယ်။ မင်းသွားချင်တယ်ဆိုသွားလိုက်ပေါ့။ (သွားလိုက်တော့ မင်းသွားလိုက်တော့ မဟုတ်ဘူးနော်)
ကိုယ့်ရဲဘော်အပေါင်းတို့ကိုလည်း သတိပေးတပ်လှန့်ရပါဦးမယ်လေ။ ကိုယ်တို့တွေက ဆယ်လီဗျစ်တီဖြစ်လာပြီဆိုတော့ နေတာ သွားတာ ပြောတာ ဆိုတာကလေးတွေ ဆင်ခြင်နိုင်မှ တန်ကာကျတော့မယ်ဗျို့။ ချိုပြုံးသီချင်းထဲကလို ဒဿဂီရိမျက်နှာငှားပြီး မျက်လုံးပေါင်းများစွာနဲ့ ကြည့်နေခိုက်မှာ လူနာကို ဆေးကုရုံတင်မဟုတ်ပဲ စကားလက်ဆုံကလေးတွေ ပြောလို့ ကိုယ်ဘာလုပ်နေသလဲ။ ဘာဆက်လုပ်ဖို့လိုသလဲ။ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲဆိုတာ သူတို့ကို သိစေအပ်ဖို့ လိုလာပါပြီ။ မင်းကဆရာလား ငါက ဆရာလား ဆိုတဲ့ စကားတွေ ပြောနိုင်တဲ့ ခေတ်က ကုန်သွားပြီဗျ။
ဘာလေးဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက် ကျီးကန်းများအာသလို ပိတ်ပိတ်ပြီး ကာနေတာပဲ လို့တော့ မထင်လိုက်နဲ့ဦးနော်။ ကိုယ့်ဘက်မှာလည်း သူများတွေ စွပ်စွဲနေသလို ချို့ယွင်းချက်တွေ ရှိတန်သလောက်ရှိတာ ၀န်ခံပါတယ်။ ဒီစာတွေရေးနေရတာဟာ ကိုယ့်အပြစ်ကိုယ် ဖုံးပြီး သူများတကာအပေါ် အပြစ်ပုံချဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘက်က ပြင်စရာရှိတာလေးတွေကိုလည်း မသိမသာတော့ ပြောထားမိပါတယ်။ တော်တော်ကြာ ကျီးတောဝင်မရ ဒေါင်းတောဝင်မရနဲ့ ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ အရိပ်နေနေ အခက်ချိုးချိုးတော့ ရေးလို့မရဘူးပေါ့။ သူများတကာ ဘာမသိညာမသိနဲ့ ဖိုးသူတော်သေတမ်းစာတွေ တောရမ်းမယ်ဖွဲ့ ရေးနေခိုက်မှာ ဒီကလည်း မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ငွေမြိုင်တုတ်နဲ့ထိုးတဲ့စာမျိုး ရေးသလိုဖြစ်ရင် သွေးပုချိ။ သွေးပုချိ။ နောက်မှ မိနုတို့ သာဒုတ်တို့ဆီက ထမခြောက်နည်းနည်း တောင်းစားတော့မယ်။
Credit @ dr soe min